Arday Baratay Culuum uu ka mid yahay Computer-ka oo Shahaado lagu gudoonsiiyay Boosaaso. – SBC
Arday Baratay Culuum uu ka mid yahay Computer-ka oo Shahaado lagu gudoonsiiyay Boosaaso.
Posted by Webmaster on January 7, 2012 Comments
Waxaa Shalay gelinkii dambe Magaalada Boosaaso Gaar ahaan Hotel Banorama lagu qabtay Xaflad ku aadaneyd Shahaado gudoonsiin taas oo u qabsaday Machadka New Generation oo lagu barto Culuumta kala duwan sida Comuterka iyo Englishka.
Xaflada ayaa waxaa ku sugnaa oo ka soo qeyb galay qeybaha kala duwan Bulshada Maamulaka Waxbarshada gobolka , Maamulka Machadkan iyo weliba Ardayda Shahaadada la gudoonsiinayay oo gaarayay 300 oo arday iyo weliba Saxaafada.
Faysal Cabdi Cartan Maamulka Machadka New Generation ayaa furay qudbadihii laga jeediyay Xafladaasi waxaana uu sheegay in machadka uu gudoon siinayo Shahaado in ka badan 300 oo arday kuwaasi oo isugu jira kuwo Bartay Culuumta kala duwan ee uu Machadku bixiyo.
Waxa uu Cartan tilmaamay in qaarkood Ardayda shahaadada qaadaneysa in ay aad u barteen Computer-ka iyagoona qaraaci kara ama wax ku qori kara iyagoo indhaha ka xiran, taas oo uu sheegay in qaarkoodba ay ku tartamaan.
Waxaana tartankii mudooyinka ka socday macadka ku guulaystay siciid xasn faarax oo isag abaal marin lagu gudoonsiiyay isla markaana noqday macalin kamid ah macalimiinta macadka
Sidoo kale Shamis Muuse Maxamed oo ah gudoomisada Waxbarashada gobolka Bari ayaa halkaasi ka jeedisay qudbadeeda kaga aadan Waxbarashada gobolka iyadoona soo dhaweysay nidaambkan waxbarashoo ee uu soo bandhigay Machadka New Generation Boosaaso, islamarkaana ku tilmaantay mid aad loogu riyaaqay.
Sikastaba ha ahaatee Ma ahan markii ugu horeysay oo uu shahaado gudoonsiin u sameeyo Machadkan Arday wax ka baratay waxana tani noqoneysaa dufcadii labaad ee ka qalin jebisa.